Farmaajo oo kashifay qodobadii muhiimka ahaa oo ay isku diidanaayeen maamul-gobolleedyada – Kalfadhi
Farmaajo oo kashifay qodobadii muhiimka ahaa oo ay isku diidanaayeen maamul-gobolleedyada
August 22, 2020 August 22, 2020 Hassan Istiila
Habeen ka hor magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu soo gaba-gabeeyay shirkii saddexaad ee Dhuusamareeb, kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo amniga.
Saddex maamul Goboleed oo kala ah Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug, maamulka Gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda federalka, ayaa ka qeyb-galay shirka, waxaana ka maqnaa maamulada Puntland iyo Jubbaland.
“Waxaa farxad inoo ah in shirkii saddexaad ee Dhuusamareeb aan soo gaba-gabeyno, kaas oo aan u fadhinay muddo 7 casha ah. Waxaan ku lafa-gurnay wax yaabo badan, meel kasta oo aan ka fiirinay aan isku diidnay, sidoo kale wax walba oo aan isku oggolaan karnana aan isugu oggolaanay”.
“Waxaan isku jirnay masaafo dhan dhulka iyo cirka , iyagu waxaa ay taagnaayeen in ay wax soo xulaan, oo tirada ergada ee sannadkii 2016 oo aheyd 51 ay hoos uga dhacaan, ayna gaarsiiyaan ergada 21 iyo wax ka hooseeya. Qaarna ay dhaheen maxaan madaxweyne u ahay haddii aan dadka soo xuleynin, waliba qaar ayaa kasii daray oo ay yiraahdeen oo maan isaga tagno meesha, haddii aan waxba soo xuleynin, dadka meelaha tag-taagan kuligood waa hore ayey iga tagi lahaayeen, maxaa ay iigu imaanayaan haddii aan soo xuleynin. Annigana meeshii aan joogay waa la oggaa”, ayuu yiri.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Baarlamaanka, ayaa isku aragti ka ahaa in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo Doorasho Qof iyo Cod ah, madaama Baarlamaanka uu ansixiyay sharci doorasho.
Qodobadii lagu heshiiyay waxaa kamid ahaa in halkii kursi ay u codeeyaan ergo gaareysa 301, taas oo aad uga badan tirada ergedii codeysay doorashadii hore. Qodobada kasoo baxay shirka, marka uu Baarlamaanku ansixiyo ayuu noqon doonaa heshiis rasmi ah.
Wajigii saddexaad ee shirka wadatashi waxaa ka soo qayb galay Madaxweynaha Jamuuriyada Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo oo shirka guddominayey iyo Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada ay ka midka yihiin Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye-Qoorqoor oo shirka marti galiyey, Madaxweynaha Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasis Xassan Maxamed Laftagareen iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish).
Akhriso: Heshiiska Dhuusamareeb iyo nooca doorasho ee lagu heshiiyay
Akhriso: War-murtiyeed ay wadajir usoo saareen Puntland iyo Jubaland, oo ku saabsan shirkii Dhuusamareeb 3